Ny fanaraha-maso ny fandaniana farany ho an'ny orinasanao
Mora kokoa ny mampitombo ny tombom-barotrao amin'ny fitantanana tsara ny fandanianao fa tsy amin'ny fampitomboana kely ny varotrao. Na izany aza, ho an'ireo mpitantana fananan-trano fialan-tsasatra lehibe dia mety ho sarotra be ny manara-maso ny fandaniana ataon'ireo mpiasa isan-karazany amin'ny anaran'ny tompona antoko fahatelo maro.
Ankoatry ny fiantohana fa tsy misy fandaniana mandeha tsy voafindra, dia zava-dehibe indrindra koa ny manome antoka fa ny vola lany rehetra dia atokana ho an'ny fananana marina. Na dia azo atao aza ny mitazona ny ambony indrindra amin'ny vola miditra sy amin'ny fandaniana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fitantanana ny antoko fahatelo toy ny Xero, mazàna ireo dia tsy mamela ny tombom-barotra hikajiana tanteraka miorina fitokisana, ary tsy ahafahan'izy ireo mamela ny tomponao hanara-maso ny tombony amin'ny tena izy.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou manampy amin'ny fanarahana ny fandaniana?
Zeevou tsy mamela anao hanara-maso fotsiny famandrihana-ny vidiny mifandraika amin'ny Kaomisiona OTA, manadio vidiny, na vidin'ny fifanakalozana, miaraka amin'ny fisoratan'i Zeevou's Expense Tracking dia azonao atao ihany koa ny mandrindra karazana fandaniana hafa.
Ny rafitra dia malefaka be amin'ny famelana anao hamorona karazana fandanjana manokana, mampifandray azy ireo amin'ny kaonty manokana ary mampihatra kaody hetra tianao. Ankoatr'izay, ny vola azo dia atokana ao amin'ny haavon'ny fananana, haavo unit, na koa ny haavon'ny famandrihana. Ny fizarana ambaratonga dia azo atao mifototra amin'ny isan'ny singa ao anaty trano iray, na azo lanjaina arakaraka ny isan'ny famandrihana isaky ny singa ao anatin'ny iray volana.
Ny fandaniana rehetra ampiana ao Zeevou dia raisina ao amin'ny tatitra isam-bolana isam-bolana izay azo isaky ny fifanarahana izay faritoinao amin'ny rafitra ho an'ny mpampiasa vola. Io dia mamela fahafenoana famakafakana tombony Hatao ianao, ahafahanao manitatra ny orinasanao mifototra amin'ny fahatakarana tsara ny tena tombom-barotra azonao fa tsy famandrihana vola-mifantoka mifandraika amin'izany. Mandritra izany fotoana izany, ny fidiran'ny tompony amin'ny alàlan'ny vavahady tompony manome ny tompony fa mety hiaraka hampiantrano anao amin'ny fandriam-pahalemana tanteraka ianao fa mangarahara tanteraka amin'izy ireo. Afaka matoky izy ireo fa manara-maso tsara ny vola miditra ianao, ary koa ny fandaniana mety hividianana azy ireo.